अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रश्न : माधव पक्षको रोजाई गठबन्धन हो कि पार्टी ? « Sansar News
अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रश्न : माधव पक्षको रोजाई गठबन्धन हो कि पार्टी ?
२१ श्रावण २०७८, बिहीबार १५:१७
साउन २१, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्ष निर्णायक मोडमा उभिएको छ । केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वको रुपमा स्वीकार गर्दै एमालेमा फर्किने कि गठबन्धनलाई रोजेर छुट्टै पार्टी बनाउँदै सत्तामा जाने ? उसका लागि प्रश्न गम्भिर छ । माधव समूहभित्र ठूलो समूह एमालेबाट बाहिरिनुपर्ने लाइनमा छन् । देउवाको पक्षमा मत दिने अधिकांश सांसद पनि ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै नयाँ ढंगले अगाडि जानुपर्ने लाइनमा छ ।
यस्तोमा निर्णय लिन माधव पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । काठमाडौंमा बस्दै गरेको माधव पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकले जसबारे निर्णय लिने सम्भावना छ । हामीले बैठक सुरु भईरहँदा माधव पक्षकी प्रभावशाली नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अबको सम्भावना के हो भनि प्रश्न गरेका छौं । संसार न्यूजका सन्देश अर्यालले नेतृ शाक्यसँग गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :
बाहिर चर्चा, तपाईँहरु विभाजनको अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने छ । ओली पक्षका नेताहरुले पनि त्यहि रुपमा अथ्र्याएका छन् । के हो वास्तविकता ?
हामी विभाजनमा जाँदैनौं । विभाजन गरेर जाँदा कसैको पनि हित हुँदैन् । केहि गरेर हुँदै भएन भने अन्तिम हतियार त्यो पनि सक्छ तर, हामी विभाजनको पक्षमा छैनौं । अहिले हामी एमाले एकताकै पक्षमा छौं ।
यहाँ धेरै अड्कलबाजी गरिएको छ । ओली जी पक्षका साथीहरुले धेरै अफबा पनि फैलाएको अवस्था छ । त्यस्तो होइन् । हामी एकताको पक्षमा छौं । हामीले निकै दुःख गरेर यो पार्टीलाई बनाएका हौं । हामी यत्तिकै छाड्नै पक्षमा छैनौं ।
तपाईँहरुभित्र दुई थरि मत देखिन्छ । विशेषतः सरकारमा जाने कि पार्टी तिर फर्किने ? तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
फरक–फरक विचार आउने विषय स्वभाविक छ । त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर, अहिले हामी सरकारमा जानु हुँदैन् । हिजोको परिस्थिति र आजको बेग्लै छ । आजको हाम्रो जोड पार्टी एकताको पक्षमा नै हो । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको निष्कर्ष पनि विभाजन होइन् एकता भन्ने नै थियो । तत्कालिन समय त हामीले एकताको पक्षमा जोड दिएका थियौं भने अहिले त परिस्थिति धेरै फेरिएको छ । ओली जी धेरै कमजोर हुनुहुन्छ भने उहाँमा देखिएको अहंकार पनि धेरै शान्त भएको अवस्था छ । सत्ताबाट बाहिरिएको अवस्था छ । त्यसकारण अवस्था धेरै फेरिएको छ ।
हामीले उठाएका मुद्दाहरुलाई पार्टीभित्रै बसेर प्रक्रियाबाटै निकास खोज्न सक्छौं । हामी फेरि एमालेलाई पुुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्छौं । यहाँ व्यक्ति ओली अथवा अर्कोले के गर्यो भन्ने तर्फ लाग्न आवश्यक छैन् । एमाले कुनै अमुक नेताको मात्र नभई लाखौं जनता, कार्यकर्ताको पार्टी हो ।
नेपालको राजनीति जहाँ उभिएको छ, जसरी सरकार गठन भएको छ, यसको मुख्य स्वामित्व तपाईँहरुलाई नै गएको देखिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा पनि तपाईँहरुको योगदानको विषयलाई मुख्य रुपमा हेरिएको छ । यो अवस्थामा सरकारमा नजाने भन्ने विषय त अस्वभाविक हुन्न र ?
हामी एक्लैले मात्रै भूमिका खेलेका होइन्, संसद जोगाउन गठबन्धनका सबै पार्टीहरुको भूमिका महत्वपूर्णं छ । आगामी समय जोगाउने विषयमा उहाँहरुको भूमिका धेरै छ ।
प्रतिनिधिसभा पुर्नजिवित भईसकेको छ । सरकार बनाएर सुम्पीसक्यौं । गठबन्धनमा बस्ने दलहरुको दायित्व संसद जोगाउने र सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसार सक्रिय बनाउने कुरा हो ।
यहाँ हाम्रो मुल दायित्व नेकपा (एमाले) बचाउने हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि नेकपा (एमाले) निकै महत्वपूर्णं शक्ति हो । एमाले कमजोर भयो भने कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुन्छ र लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ ।
हामी पार्टी नै बिहिन बन्ने अवस्थामै पनि आन्दोलनमा होमियौं । तर, अहिले हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्वपूर्णं पक्ष हाम्रै पार्टी जोगाउने विषय हो । हाम्रो धरातललाई जोगाउन आवश्यक छ । पार्टी बिना हामी केहि गर्न सक्दैनौं । यो अवस्थामा गठबन्धन भनेर मात्रै हुँदैन् ।उहाँहरुलाई हाम्रो सल्लाह, सुझाब त रहिरहन्छ । हामीले बाहिरबाट सहयोग गर्न सक्छौं ।
देउवालाई मत दिने अधिकांश सांसद सरकारमा जानुपर्छ भन्ने लाईनमा देखिनुहुन्छ । फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषय पनि छ । चर्चा, तपाईँहरुकै कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार नगरिएको भन्ने पनि छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
सरकारको कुरा मात्रै होइन् । हामीले लोकतन्त्र जोगायौं, गणतन्त्र जोगायौं, प्रतिनिधि सभा जोगायौं, संविधान जोगायौं । यी सबै सफलतासँगै नयाँ सरकार पनि बन्यो । हामीले जे–जति गर्न सक्थ्यौं त्यो हामीले गर्यौँ । यसमा हाम्रो मात्रै भूमिका पनि होइन् । महत्वपूर्णं भूमिका रह्यो होला तर, भूमिका कांग्रेस, माओवादी, जसपा सबैको छ ।
त्यति फरक हो कि, हामी पार्टी नै बिहिन बन्ने अवस्थामै पनि आन्दोलनमा होमियौं । तर, अहिले हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्वपूर्णं पक्ष हाम्रै पार्टी जोगाउने विषय हो । हाम्रो धरातललाई जोगाउन आवश्यक छ । पार्टी बिना हामी केहि गर्न सक्दैनौं । यो अवस्थामा गठबन्धन भनेर मात्रै हुँदैन् । उहाँहरुलाई हाम्रो सल्लाह, सुझाब त रहिरहन्छ । हामीले बाहिरबाट सहयोग गर्न सक्छौं ।
सत्तामा अंकगणितको विषय पनि हुन्छ । जसपा आफैंमा विभाजित छ । यस्तो अवस्थामा माधव पक्षले सहयोग नगर्दा अंकगणितमा समस्या आउला नि ?
त्यस्तो समस्या आउँदैन । सत्तामा बस्नेहरु एकताबद्ध हुनुपर्यो, दुरदर्शी हुनुपर्यो, जनताको पक्षमा काम गरेपछि समस्या हुँदैन् ।
हामी निकै अप्ठ्यारोमा छौं । हिजो सबै छाडेर देश र संविधान जोगाउन लागेका थियौं । आज हामी पार्टी जोगाउनु पर्ने अवस्थामा छौं । हामी पार्टीलाई छाडेर अरु विकल्पमा जाने पक्षमा छैनौं ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले केहि दिन अगाडि मात्रै पार्टी विवादको बारेमा निकै गम्भीर खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले प्रष्ट रुपमा माधव नेपालसहित मुख्य–मुख्यलाई पार्टीभित्र ल्याउन नसकिने भन्नुभएको छ । उहाँ पक्षका नेताहरुले पनि प्रष्ट रुपमा माधवलगायत मुख्य केहि नेतालाई फेरि स्वीकार गर्न नसकिने पनि बताएका छन् । यो अवस्थामा फेरि एमाले एकता हुन्छ र सहज रुपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना छ र ?
सत्ता र शक्तिबाट च्यूत भईसकेपछि आक्रोश पैदा हुन्छ । च्यूत गराउनेप्रति घृणा पैदा हुन्छ । हेर्नुहोस् न कति तुच्छ खालका शब्दहरु प्रयोग भएका छन् । के त्यो शब्द प्रयोग गराई उहाँ (ओली)को लागि सुहाउने विषय हो र ? त्यस्तो शब्द प्रयोग गराई निकै गलत छ । त्यस्तो सोंचबाट आक्रान्त हुनुहुँदैन् नेताहरु ।
सत्ता र शक्तिबाट च्यूत भईसकेपछि आक्रोश पैदा हुन्छ । च्यूत गराउनेप्रति घृणा पैदा हुन्छ । हेर्नुहोस् न कति तुच्छ खालका शब्दहरु प्रयोग भएका छन् । के त्यो शब्द प्रयोग गराई उहाँ (ओली)को लागि सुहाउने विषय हो र ? त्यस्तो शब्द प्रयोग गराई निकै गलत छ । त्यस्तो सोंचबाट आक्रान्त हुनुहुँदैन् नेताहरु । नेताहरु दुरदर्शी हुनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, संयम् हुनुपर्यो । जथाभावी बोल्ने नेताबाट अरुले के सिक्ने ?
अर्को कुरा हिजो त्यो प्रवृत्ति र शैली थिएन भन्ने होइन्, हामी त्यो शैली र प्रवृत्तिविरुद्व लड्दै आएको हो । एमाले जोगाएको सजिलो गरि होइन् । पटक–पटक फुट्न खोजेको अवस्था पनि थियो ।
फरक यत्ति हो कि आज हिजोभन्दा अलि बढि दरो ढंगले लड्नुपर्ला । अलि मेहनत गर्नुपर्ला । त्यसको लागि हामी तयार छौं । हामीले दुःख गरेर बनाएको पार्टी, मेहनत गरेर बनाएको पार्टी, सजिलै जेसुकै होस् भनेर छाड्ने पक्षमा छैनौं । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
भनेपछि जे गर्नुपरे पनि पार्टीभित्रै गर्ने भन्ने निष्कर्ष तपाईँको हो, होइन् ?
कुनै कुरामा जित हात पार्न त्यहिँभित्र नै गएर लड्नुपर्छ । बाहिरबाट लडेर सकिन्न । बाहिर बसेर जिस्क्याएर वा कराएर हुँदैन् । हामी भित्रै गएर उहाँ(ओली)का गलत प्रवृत्ति र शैलीका विरुद्ध लड्नुपर्छ । पार्टीलाई सहि ठाउँमा ल्याउन भित्रै बसेर मात्रै सम्भव हुन्छ ।
पार्टीभित्र कुन पक्षको कति शक्ति छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्णं हुन्छ । अहिले ओली पक्ष संसद र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा बलियो अवस्थामा देखिन्छ । उहाँले माओवादी छाडेका केहिलाई समेटेर थप आफ्नो पक्षमा बल सिर्जना गर्नुभएको छ । यो अवस्थामा तपाईँहरुले जित्ने विषय सहज र सम्भव छ र ?
त्यस्तो हुँदैन् । त्यहाँभित्र गईसकेपछि धेरै कुरा हुन्छ । हामी यसै पनि बाहिर हल्ला गरिएजस्तो कमजोर अवस्थामा छैनौं । हाम्रो पनि संगठन छ । अनुभवि र राम्रो नेताहरुको ठूलो समूह छ । हाम्रा पनि योजना छन् । सबै कुरा गरेर साध्य छैन् ।